Ukugcobela A Unetyala-Free Uhambo: Ihostela Indawo yokuhlala | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Ukugcobela A Unetyala-Free Uhambo: Ihostela Indawo yokuhlala
Kwiihostele ziye rap embi ngokuba mdaka, nokuguquka, kanye stinky. Kodwa ubusazi ukuba iihostele ziphuculwe ngoku? Kuba abo awuyazi into iihostele ukuba, Khange siphawule nje ihotele kwaye sibaleke nayo. Kwiihostele na indawo cheap oko kuya kukunceda kuzolula mali uhambo lwakho.
Enoba umhambi solo okanye uhamba kunye nosapho lwakho okanye nezinye, kwiihostele nodidi yokuhlala nje wena. Kwiihostele zidla nzeka amagumbi. Igumbi ekwabelwana angaba 8 ukuba 10 abantu bonke Banking ndawonye. Abanye baye magumbi ebinokuba 3 okanye 4 abantu ababelana igumbi. Ukuba ukhetha indawo yakho, iindawo ezininzi zinika kumagumbi angasese okanye amagumbi usapho, ukuba wena akunguye ukuhamba neentsapho.
Yintoni Ukuze Lindela
Kwiihostele akufanelekanga frills ukuba iihotele banikele. Ngoko ke ukuze kungabikho umatshini coffee ngaphakathi egumbini lakho, akukho sepha zasimahla, okanye eyakho ifriji. Akuyi nokuba ngebephumelela iitawela free. Kodwa abanye kwiihostele okunene athengise isepha kunye nezinye izinto ngexabiso cheap. kwaye uqinisekise, mhlawumbi uza kuba ngumbophi yakho okanye indlu yangasese kumagumbi ekulala, kodwa zinalo neelokhari apho uyakwazi ukugcina izinto zakho. Mhlawumbi kufuneka ukuba padlock yakho nakuba. Ukuba bag yakho inkulu kakhulu kwaye emva ekuphumeni, usafuna ukwenza ezinye ngomzuzu wokugqibela indawo ukhamba, uyakwazi ushiye ingxowa yakho evenkileni imithwalo.
Ngaphandle kokuba yindawo ecocekileyo yokulala kunye ukhusele isixhobo sokugcina izinto zakho, ezinye zezi ndawo benze nezinye izinto kwakunye. Ezinye iindawo ziza kuba izinto ezifana nokufikelela pool, kwasekuseni free, coffee ezamahala, imisebenzi yasekuhlaleni. Abanye bade babe kwiisauna iishawa massage and zokudlela eyochitha.
Kulungile, qiniseka, mhlawumbi akuyi ukufumana ukhuseleko okufanayo u ehotele. Kukho iindawo zoluntu ezifana zangasese, Kitchen, iindawo lounge, kunye neendawo zokusebenza. kunjalo, le yindlela elungileyo ukuhlangabezana abantu. Ukuba niso- kwiindawo zoluntu unga ukuhlangabezana abahambi abavela kulo lonke ihlabathi. Kwaye ukuqala abahlobo nabantu odibana nabo yakho ngohambo kwaye buddies ezintsha seehambo, kakhulu! Abantu abasebenza kwiihostele abantu bavame fun ingqondo kwaye kwakha nobuhlobo, ngoko ke kulungile ukuba bahlangane baze babe nonxibelelwano kunye nabo, njengokuba.
Ukuze Wamfumana Phi Them
Ezinye iihostele zikhona izixeko okanye iindawo Kungenjalo akuyi nokuba babone. Freehand Miami, ihostele eFlorida, kuba iibhloko ezimbini kuphela kude elunxwemeni kwaye unika coffee ezamahala ebandisiwe kwiindwendwe zawo. Kwaye ihostele Spa Swiss uqalwa nzuzo ekuthiwa Hostelling International ine yokutyela yangaphakathi ukuba zihoyi zaseSwitzerland.
Kangakanani zixhobo zingaxabisi
Ukuba umhambi mali, ukuba kungenzeka kakhulu ukuba uya kuba kakhulu alusenamdla ekuhlaleni ihostele. Amaxabiso angaqala ukusuka ezantsi njengeesenti ezimbalwa ukuya $100 kuba kumagumbi ekulala, ngokuxhomekeke kuyo yinxalenye yehlabathi wena ku, kodwa kunqabile kakhulu ngamaxabiso ukuya ngaphezu koko. Nkqu ihostele leyo zihoyi i Alps iyajikeleza $64 ubusuku ngalinye.
Ulwazi yokugqibela sifuna ukukunika ukuba, Eyona ndlela ibhetele ukuya kwihostele lwakho nge uhambo ngololiwe Gcina A Isitimela kwaye isizathu soko kukuba oololiwe basoloko zifike entliziyweni isixeko kwaye kulapho yokulala ehostele, kunandipha zokuhamba uloliwe yakho zokuhamba.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye nombhalo kunye nje zisinika ngetyala ngekhonkco kule post blog, okanye cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fenjoying-a-guilt-free-trip-hostel-accommodation%2F%3Flang%3Dxh- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Ukuba ufuna ukuba nobubele kubasebenzisi bakho, wena ndiyabakhokela ngqo amaphepha ukufuna yethu. Kule ikhonkco, uya kufumana iindlela zethu kakhulu ethandwa uloliwe – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/in_routes_sitemap.xml, kwaye ungatshintsha indlela / kwi / pl okanye / de kwiilwimi ezininzi.
#hostele #kuleya traveltips
UKarina Santos - ngumama womntwana oneminyaka emi-2 ubudala, kunye nomfazi. Usuku lwakhe luzaliswe ngama-diapers kunye ne-imeyile. Ngesi sizathu, Ufumanise inqanaba elitsha elipheleleyo lemisebenzi emininzi. Iintsuku zakhe zeveki ubukhulu becala zijikeleza umsebenzi, kunye nosapho. Uyakuthanda ukuchitha impelaveki nomntwana wakhe kwaye uhamba ngobusuku bomhla nomyeni wakhe. - Unako cofa apha ukuze Qhagamshelana nam